Colour painting and Color palette makers Nagu Saabsan – Xulashada Midabka Muuqaalka
Nagu Saabsan – Xulashada Midabka Muuqaalka
Bridgegalleryny.com waa degel loo diyaariyey adiga doonaya in aad ka faa iidayso midabeeyaha sawirku soo xushay, midabeeyaha RGB ee doorashada, midabeeyaha midabka chrom, xulo midab muuqaal, dooranaya midabka korantada, xulashada midabka html, xulashada midabka html ee sawirrada, iyo adeegsiyo badan oo dheeri ah oo websaydhkan ah.
Bridgegalleryny.com waa mid aad u faa’iido badan oo idinka mid ah oo u shaqeeya sida nashqadeeyayaasha midabka, rinjiyeyaasha, sawir-bixiyeyaasha midabka, sawir-qaadeyaasha midabka leh ee android, sameeyeyaasha websaydhada iyo naqshadeeyayaasha, qurxinta qolka, naqshadeeyayaasha, iyo xirfado kale oo badan oo ka faa’ideysan kara websaydhkan.
Websaydhkan ‘Bridgegalleryny.com’ wuxuu si faahfaahsan u sharxi karaa dhammaan waxyaabaha midabka leh ee ku jira muuqaal, ay ku jiraan taxanaha midabaynta badan, midabada muunad ah, midabada hexanka, midabada RGB, iyo magacyada midab oo dhammaystiran oo dhammaystiran
Haddii aad abuurto bog bog ama baloog ama xirfadle ama blog hiwaayadda, waan hubaa inaad aad u adkaan doonto inaad ka baxdo midabka hexadecimal ama hex midab. Sababta oo ah hex midabkan ayaa inta badan loo adeegsadaa sameynta noocyo kala duwan oo midabyo ah websaydhka.
Maxaa loola jeedaa Midabka Hex?
Midabka Hex runtii maahan midab laakiin waa mid ka mid ah qaababka loo qoro nambarada midab ee ka dhexeeya noocyada kale ee midabaynta, sida RGB, HTML, ama waxyaabo kale. Sidaa darteed loo yaqaan Hexa midabka Koodhka, ama loo soo gaabiyo sida Hexa Code ama Hexa Coor ama Hex Midabka.
Qoraalku wuxuu isticmaalaa lambarada 0 illaa 9 iyo xarafyada (min A ilaa F), tirada nambarku wuxuu ka kooban yahay 6 xaraf, wuxuu ka koobnaan karaa oo keliya nambar ama xarfo, ama isku darka lambarrada iyo xarfaha. Ka dib calaamadee ahaan hortiisa isaga oo adeegsanaya xayndaabka bilowga.
# 000000 (nambarada kaliya)
#FFFFFFF (xarfaha oo keliya)
# FF0000 (lambarada iyo xarfaha oo iskujira)
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad ku jirtid adduunka naqshadeynta garaafka iyo daabacaadda, waa inaad taqaanid ereyga midabka RGB, kaas oo loogu talagalay Muuqaalka Dijital ah ama muujinta dhijitaalka ah.
Maxaa loola jeedaa midabka RGB ???
RGB waxay u taagan tahay “casaan-cagaaran-buluug” waa moodal iftiin midab leh (midab midab lagu daro) oo loo isticmaalo aaladaha sida qalabka mashiinka iskaanka ah iyo aaladaha wax soo saarka sida bandhigyada muraayadaha, midabada aasaasiga ah (Casaanka, Buluugga, Cagaarka) taas oo kuxiran teknolojiyadda aaladda loo isticmaalo sida CCD ama PMT kumbuyuutareedka ama kumbuyuutarka dijitaalka ah, CRT ama LCD shaashadda korjoogtada ah.
Goorma (Red-buluug-cagaaran) saddexda midab ayaa la isugu daraa si ay u noqdaan caddaan, waana sababtaas sababta RGB loogu yeerayo Midab Additive ama midabyo iftiin luqadeed. Midabka RGB waa mabda’a midab ee ay adeegsadaan warbaahinta elektiroonigga ah sida telefishanka, kormeeraha kumbuyuutarrada iyo iskaanka. Sidaa daraadeed, midabada ay soo bandhigtay RGB had iyo jeer waa dhalaalaya oo raaxo leh, sababtoo ah waxaa loo habeeyay qaab ah sida loola socdo muujinta, ma aha daabicista si ay xor ugu yihiin inay ku ciyaaraan midabada. Laakiin taasi micnaheedu maahan in RGB dhib la’aan tahay maxaa yeelay soo bandhigida midabka RGB ayaa had iyo jeer lagu xidhi doonaa awoodda / awooda sawirada kumbuyuutarka ee fuliya. Markaa haddii kombuyuutarka aan isticmaalno uu leeyahay kaarka jaantuska wanaagsan iyo kormeerka LCD, soo bandhigida midabka RGB wuxuu aad uga fiicnaan doonaa tuubada tuubada ee leh kaarka garaafyada caadiga ah.
Kuwa soo socda, waxaan ku sharixi doonaa hababka ay tahay inaad u adeegsato midabka soo qaadashada sawirku sida soo socota:
1. Dhagsii Xulo “Xulo Sawirkaaga” ka dibna dooro sawirka aad rabto inaad ogaato koodhka midabka oo aad geliso.
2. Ku qor magaca sawir khaanadda bannaan, kadib “Gali magaca sawir”
3. Kadib guji “Gudbi”
Taas ka dib taxanaha midabaynta ugu weyn, tusaalooyinka midabada, midabada hexanka leh, midabada RGB, iyo magacyada midabku waa kuwo dhameystiran oo dhammaystiran oo miis ah.
Fadlan iskuday inaad soo geliso sawirro badan oo aad haysato. Oo fiiri natiijooyinka isku darka midabada ee lagu soo saaray miiska. Sawirka aad soo gelisay wuxuu muujinayaa dhamaan midabyada waaweyn, midabka hexanka leh, Midabka RGB, iyo waliba magaca midabka.
This "Nagu Saabsan – Xulashada Midabka Muuqaalka" graphic has 20 dominated colors, which include . It makes so beautiful color combination inspired from this image.